Young men browse their Facebook wall on their smartphones as they sit inastreet in Yangon on August 20, 2015. Facebook remains the dominant social network for US Internet users, while Twitter has failed to keep apace with rivals like Instagram and Pinterest,astudy showed. AFP
လူမှုကွန်ရက် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက် မြန်မာပြည်မှာ အသုံးအများဆုံးက Facebook ဖြစ်ပါတယ်။ Twitter, Instagram, WeChat, Snapchat စတာတွေကို သုံးသူ အလွန်နည်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အင်တာနက်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတာ စစ်အစိုးရခေတ်ကတည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီခေတ်က MPT မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနက လူတစု စီးပွားရှာတဲ့ လုပ်ငန်းလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ Sim Card တခုကို ဒေါ်လာ (၂၀၀၀) ကျော်နဲ့ ရောင်းနေခဲ့တဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအစိုးရ တက်လာပြီး ပြုပြင်ရေးလုပ်တော့မှ Sim Card တစ်ခုကို တစ်ဒေါ်လာအထိ ဈေးကျလာပါတယ်။
အခုတော့ MPT တစ်ခုတည်း မဟုတ်တော့ဘဲ Telenor နဲ့ Ooredoo တို့ကပါ မိုဘိုင်းစနစ် ဖြန့်ဖြူးနေတာမို့ (၂၀၁၆) ရောက်တော့ Sim Card (၄၂) သန်းကျော် ရောင်းရကြောင်း သိရပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ကို အချိန်တိုအတွင်း သုံးခွင့်ရသွားသူတွေဟာ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက် မလုပ်တတ်၊ မကိုင်တတ် ဖြစ်နေသူက (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိတယ်လို့ ၂၀၁၈ Telenor အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ မိုဘိုင်းကွန်ရက်က လူငယ်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ သိရအောင် Save the Children အဖွဲ့က လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်မှာ ကောင်းတာကို လုပ်နိုင်သလို၊ မကောင်းတာကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှု၊ ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်သလို၊ အမုန်းစကား ပြန့်ပွားမှု၊ အမျိုးသမီးတွေကို နှောင့်ယှက်မှု၊ သွေးဆောင်ဖြားယောင်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု စတာတွေကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုကို ရည်ရွယ်ပြီး၊ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုရေးသားတဲ့ အမုန်းစကားတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ အများဆုံးတွေ့နေရတာကို လူငယ်တွေ စိတ်ကုန်လာပြီလို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ဟာ သတင်းအတုနဲ့ အမုန်းစကားရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ပြည်သူကို လွှမ်းမိုးစေတာကို လေ့လာစမ်းစစ်တာမျိုး အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ဥပမာ Facebook မှာ အန္တရာယ် ရှိတာတွေပါတယ် ဆိုတာလောက်ပဲ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ရဲ့  ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေကို လေ့လာဖို့ Save the Children အဖွဲ့က လူငယ်နှစ်ရာကျော်ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါတယ်။ အမုန်းစကား၊ ဝါဒဖြန့်မှု၊ သတင်းအတု၊ ကောလာဟလ၊ သွေးထိုးလှုံဆော်မှု စတာတွေရဲ့  အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စုံစမ်းမေးမြန်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင် နဲ့ ကယားပြည်နယ်တို့ကို အဓိကထားပါတယ်။ လူငယ် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက် Facebook ကို ကြည့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Facebook မှာ ဖော်ပြတာကို ယုံကြည်ကြပြီး စူးစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုး မလုပ်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ VOA နဲ့ BBC လို အသံလွှင့်ဌာနကြီးတွေကို အယုံကြည်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို ရည်ရွယ်တဲ့ အမုန်းစကားကို အများဆုံး တွေ့ရပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘဲ လျစ်လျူရှုကြတာ များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းတုထဲမှာ အမုန်းစကား ထည့်ထားတာကို လူငယ်တွေ ရိပ်မိကြပါတယ်။ အုပ်စုတစ်စုကို တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ လုပ်ကြံပြီးထားတဲ့ အမုန်စကားကို သတင်းတုထဲမှာ ထည့်ရေးတာမျိုး လုပ်တတ်တယ်လို့ နားလည်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အမုန်းစကားပါတဲ့ သတင်းတုကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုထဲမှာ အထင်မှား အမြင်မှား ဖြစ်လာတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ သတင်းအတုကြောင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်တာကိုလည်း လူငယ်တွေ သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမုန်းစကား ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံဆော်တာမျိုးကိုတော့ အွန်လိုင်းမှာရော အပြင်မှာရော တွေ့ရသူ အလွန်နည်းပါးနေပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မဟုတ်တမ်းတရမ်းလုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းတာတွေ များနေတာဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကို ထိကပါးရိကပါး ပြောတာတွေလည်း များပြားလာပါတယ်။
အနှောင့်အယှက်ခံရတာကို တုံ့ပြန်အရေးယူရင် ပိုဆိုးလာမှာ စိုးရိမ်တယ်လို့ မိန်းကလေးတွေက ပြောပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ နေ့တိုင်းလိုလို ထိကပါးရိကပါး အပြောခံနေရတာတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ဝတ်လစ်စလစ် အမျိုးသမီးပုံတွေ၊ အဝတ်အစားမကပ်တဲ့ပုံတွေ များလာတာကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေ အမြင်ပြောင်းလာတာလို့ ဆိုပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မှာ ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။ မိမိဘာသာ ပညာရှာရာမှာ အများဆုံးအထောက်အကူ ရပါတယ်။ ဥပမာ YouTube ကနေ အင်္ဂလိပ်စကား လေ့လာတာကို လူငယ်တွေ ကြိုက်ကြပါတယ်။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရတဲ့ လူငယ်တဝက်လောက်ဟာ သူတို့ရဲ့  Selfie တွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ကြပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အငြင်းပွားစရာကိစ္စတွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ပြတယ်လို့ ဝန်ခံတဲ့ လူငယ်တွေကိုတော့ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လူကြီးတွေတင်တဲ့ သတင်းဝေဖန်တွေကို Share လုပ်တာမျိုးလောက်သာ လူငယ်တွေက စိတ်ဝင်စားပုံ ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အသိပညာ တိုးပွားတာဟာ လူမှုကွန်ရက်ရဲ့  ကောင်းကျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအတုနဲ့ အမုန်းစကား၊ မိုက်ရိုင်းမှု၊ စော်ကားမှု၊ လိမ်ညာမှု စတာတွေကတော့ ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်လို့ လူငယ်တွေ နားလည်ကြကြောင်း Save the Children အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူမှုကှနျရကျ အမြိုးမြိုးရှိတဲ့အနကျ မွနျမာပွညျမှာ အသုံးအမြားဆုံးက Facebook ဖွဈပါတယျ။ Twitter, Instagram, WeChat, Snapchat စတာတှကေို သုံးသူ အလှနျနညျးပါတယျ။ မွနျမာပွညျကို အငျတာနကျနဲ့ ဆကျသှယျထားတာ စဈအစိုးရခတျေကတညျးပါ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီခတျေက MPT မွနျမာ့ဆကျသှယျရေးဌာနက လူတစု စီးပှားရှာတဲ့ လုပျငနျးလို ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ မိုဘိုငျးဖုနျးမှာ လိုအပျတဲ့ Sim Card တခုကို ဒျေါလာ (၂၀၀၀) ကြျောနဲ့ ရောငျးနခေဲ့တဲ့ခတျေ ဖွဈပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲအစိုးရ တကျလာပွီး ပွုပွငျရေးလုပျတော့မှ Sim Card တဈခုကို တဈဒျေါလာအထိ ဈေးကလြာပါတယျ။
အခုတော့ MPT တဈခုတညျး မဟုတျတော့ဘဲ Telenor နဲ့ Ooredoo တို့ကပါ မိုဘိုငျးစနဈ ဖွနျ့ဖွူးနတောမို့ (၂၀၁၆) ရောကျတော့ Sim Card (၄၂) သနျးကြျော ရောငျးရကွောငျး သိရပါတယျ။ လူမှုကှနျရကျကို အခြိနျတိုအတှငျး သုံးခှငျ့ရသှားသူတှဟော အတှအေ့ကွုံမရှိတဲ့အတှကျ မလုပျတတျ၊ မကိုငျတတျ ဖွဈနသေူက (၈၀) ရာခိုငျနှုနျးနီးပါး ရှိတယျလို့ ၂၀၁၈ Telenor အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွပါတယျ။ မိုဘိုငျးကှနျရကျက လူငယျတှအေပျေါမှာ ဘယျလောကျလှမျးမိုးတယျဆိုတာ သိရအောငျ Save the Children အဖှဲ့က လှနျခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာလက အစီရငျခံစာတဈစောငျ ထုတျပွနျထားပါတယျ။
လူမှုကှနျရကျမှာ ကောငျးတာကို လုပျနိုငျသလို၊ မကောငျးတာကိုလညျး လုပျနိုငျပါတယျ။ သတငျးအခကျြအလကျ ဖွနျ့ဝမှေု၊ ဖြျောဖွမှေုနဲ့ ပညာပေးလုပျငနျးတှေ လုပျနိုငျသလို၊ အမုနျးစကား ပွနျ့ပှားမှု၊ အမြိုးသမီးတှကေို နှောငျ့ယှကျမှု၊ သှေးဆောငျဖွားယောငျမှု၊ ခွိမျးခွောကျမှု စတာတှကေိုလညျး လုပျနိုငျပါတယျ။ လူ့အဖှဲ့အစညျးတခုကို ရညျရှယျပွီး၊ တိုကျခိုကျပွောဆိုရေးသားတဲ့ အမုနျးစကားတှေ လူမှုကှနျရကျမှာ အမြားဆုံးတှနေ့ရေတာကို လူငယျတှေ စိတျကုနျလာပွီလို့ အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွပါတယျ။ ဒီမိုကရစေီဖွဈစဉျဟာ သတငျးအတုနဲ့ အမုနျးစကားရဲ့ဒဏျကို ခံနရေပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျအတိုငျးအတာအထိ ပွညျသူကို လှမျးမိုးစတောကို လလေ့ာစမျးစဈတာမြိုး အလှနျနညျးပါးပါတယျ။ ဥပမာ Facebook မှာ အန်တရာယျ ရှိတာတှပေါတယျ ဆိုတာလောကျပဲ သိနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူမှုကှနျရကျရဲ့ ကောငျးကြိုးဆိုးပွဈတှကေို လလေ့ာဖို့ Save the Children အဖှဲ့က လူငယျနှဈရာကြျောကို တှဆေုံ့မေးမွနျးပါတယျ။ အမုနျးစကား၊ ဝါဒဖွနျ့မှု၊ သတငျးအတု၊ ကောလာဟလ၊ သှေးထိုးလှုံဆျောမှု စတာတှရေဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုကို စုံစမျးမေးမွနျးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျ နဲ့ ကယားပွညျနယျတို့ကို အဓိကထားပါတယျ။ လူငယျ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးဟာ အနညျးဆုံး တဈနေ့ တဈနာရီလောကျ Facebook ကို ကွညျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Facebook မှာ ဖျောပွတာကို ယုံကွညျကွပွီး စူးစမျးစဈဆေးတာမြိုး မလုပျကွဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ VOA နဲ့ BBC လို အသံလှငျ့ဌာနကွီးတှကေို အယုံကွညျဆုံး ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မှတျစလငျနဲ့ ခရဈယာနျဘာသာဝငျတှကေို ရညျရှယျတဲ့ အမုနျးစကားကို အမြားဆုံး တှရေ့ပမေယျ့ ဂရုမစိုကျဘဲ လဈြလြူရှုကွတာ မြားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သတငျးတုထဲမှာ အမုနျးစကား ထညျ့ထားတာကို လူငယျတှေ ရိပျမိကွပါတယျ။ အုပျစုတဈစုကို တိုကျခိုကျခငျြတဲ့သဘောနဲ့ လုပျကွံပွီးထားတဲ့ အမုနျစကားကို သတငျးတုထဲမှာ ထညျ့ရေးတာမြိုး လုပျတတျတယျလို့ နားလညျတဲ့ လူငယျတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အမုနျးစကားပါတဲ့ သတငျးတုကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုထဲမှာ အထငျမှား အမွငျမှား ဖွဈလာတာ တှရှေိ့ရပါတယျ။ သတငျးအတုကွောငျ့ ပဋိပက်ခ ဖွဈတာကိုလညျး လူငယျတှေ သဘောပေါကျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမုနျးစကား ဆနျ့ကငျြရေးအတှကျ စညျးရုံးလှုံဆျောတာမြိုးကိုတော့ အှနျလိုငျးမှာရော အပွငျမှာရော တှရေ့သူ အလှနျနညျးပါးနပေါတယျ။ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ဆကျသှယျပွီး မဟုတျတမျးတရမျးလုပျဖို့ ကွိုးပမျးတာတှေ မြားနတောဟာ စိုးရိမျစရာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မိနျးကလေးတှကေို ထိကပါးရိကပါး ပွောတာတှလေညျး မြားပွားလာပါတယျ။
အနှောငျ့အယှကျခံရတာကို တုံ့ပွနျအရေးယူရငျ ပိုဆိုးလာမှာ စိုးရိမျတယျလို့ မိနျးကလေးတှကေ ပွောပါတယျ။ အပွငျလောကမှာ နတေို့ငျးလိုလို ထိကပါးရိကပါး အပွောခံနရေတာတှဟော လူမှုကှနျရကျမှာ ရောငျပွနျဟပျနပေါတယျ။ အငျတာနကျမှာ ဝတျလဈစလဈ အမြိုးသမီးပုံတှေ၊ အဝတျအစားမကပျတဲ့ပုံတှေ မြားလာတာကွောငျ့ ယောကျြားလေးတှေ အမွငျပွောငျးလာတာလို့ ဆိုပါတယျ။ လူမှုကှနျရကျမှာ ကောငျးတာရှိသလို မကောငျးတာလညျး ရှိပါတယျ။ မိမိဘာသာ ပညာရှာရာမှာ အမြားဆုံးအထောကျအကူ ရပါတယျ။ ဥပမာ YouTube ကနေ အင်ျဂလိပျစကား လလေ့ာတာကို လူငယျတှေ ကွိုကျကွပါတယျ။
တှဆေုံ့မေးမွနျးခံရတဲ့ လူငယျတဝကျလောကျဟာ သူတို့ရဲ့ Selfie တှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ တငျကွပါတယျ။ အစိုးရနဲ့ပတျသကျတဲ့ အငွငျးပှားစရာကိစ်စတှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ တငျပွတယျလို့ ဝနျခံတဲ့ လူငယျတှကေိုတော့ မတှရေ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ လူကွီးတှတေငျတဲ့ သတငျးဝဖေနျတှကေို Share လုပျတာမြိုးလောကျသာ လူငယျတှကေ စိတျဝငျစားပုံ ရပါတယျ။ ဘယျလောကျပဲဝေးဝေး၊ ဆှမြေိုးမိတျသင်ျဂဟနဲ့ ဆကျသှယျနိုငျပွီး အသိပညာ တိုးပှားတာဟာ လူမှုကှနျရကျရဲ့ ကောငျးကြိုး ဖွဈပါတယျ။ သတငျးအတုနဲ့ အမုနျးစကား၊ မိုကျရိုငျးမှု၊ စျောကားမှု၊ လိမျညာမှု စတာတှကေတော့ ဆိုးကြိုးဖွဈတယျလို့ လူငယျတှေ နားလညျကွကွောငျး Save the Children အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။